Halyeeyadii Rome, laga soo bilaabo aasaaskeedii ilaa waqtiyadii dhexe | Wararka Safarka
Luis Martinez | 07/05/2021 10:35 | dhaqanka, Roma
Halyeeyada Rome waxay xidido ku leeyihiin asal ahaan asalka ah Magaalada Daa'im. Sidaad ogtahay, aasaaskiisa wuxuu leeyahay taariikh halyeey ah oo ka dambeeya, taas oo ah Romulus iyo Remus. Laakiin, intaa waxaa sii dheer, magaalo taariikh badan leh waa inay ku jirtaa sheekooyin kale oo badan oo sheekooyin ah oo aad u xiiseyn doonto inaad ogaato.
Ma awoodi doono inaan kuu sheegno dhammaantood, laakiin waxaan kuu xaqiijin karnaa in sheekooyinka aan kuu sheegayno inay ka mid yihiin halyeeyadii ugu qaalisanaa ee Rome oo aad ku raaxeysan doonto ogaanshahooda. Maaha wax aan waxba ka jirin oo ay ku jiraan sheekooyin la xiriira boqorradii ugu horreeyay, leh boqorada waaweyn laga soo bilaabo xilligii hore iyo mugdi Da 'dhexe magaalada quruxda badan ee Talyaaniga (halkan ayaan kaaga tagnay maqaal ku saabsan taallooyinkeeda). Laakiin, iyada oo aan la sii amba-qaadin, aan la tagno sheekooyinka khayaaliga ah ee ugu wanaagsan ee ku saabsan Magaalada Aakhiro.
1 Halyeeyadii Rome, ilaa aasaaskii magaalada
1.1 Halyeeygii aasaaskii Rome
1.2 Kufsiga Haweenka Sabine, Halyeey kale oo Roman caan ah
1.3 Luuqda Mazzamurelli
1.4 Castel Sant'Angelo, oo ah goob halyeeyo badan oo Rome ah
1.6 Jasiiradda Tiber
Halyeeyadii Rome, ilaa aasaaskii magaalada
Sidii aan kuu sheegnay, asal ahaan Rome waxay leedahay taariikh asalka ah. Laakiin sidoo kale dhacdadii caanka ahayd ee afduubka sabiyada, mahadsanid taas oo magaaladii hore ee Roomaanku ay ku kortay habeen waqtiga. Aynu raacno dhammaantood.
Halyeeygii aasaaskii Rome
Romulus iyo Remus oo ay nuugtay yey-yey
Asalka quraafaad ee Rome wuxuu dib ugu soo laabtay qarnigii XNUMXaad ee dhalashadii Ciise ka hor. Si kastaba ha noqotee, halyeeygan Rome wuxuu bilaabmayaa xitaa horaantii. Ascanio, ina Aeneas, halyeeygii Trojan, oo laga aasaasay bangiyada Tiber magaalada Alba Longa.
Sannado badan ka dib, ayaa loo yeedhay boqorka magaaladan Nambar Iyo walaalkiis Amulium isaga kursiga ka dejiyey. Laakiin dembigiisa ayaan halkaas ku joogsan. Si uusan midda hore u yeelan farcan sheegan kara carshiga, wuxuu ku qasbay gabadhiisa, Rea Silvia, si ay u noqoto Vestal, taas oo u baahneyd inay sii ahaato bikrad. Si kastaba ha noqotee, xumaanta Amulio ma aysan tixgelin doonista ilaaha Marte.
Midkani wuxuu uur qaaday mataanaha 'Rea Romulus iyo Remus. Si kastaba ha noqotee, markay dhasheen, iyagoo ka baqaya inuu boqorka sharka ahi dilo, waxaa lagu riday dambiil waxaana looga tagay Webiga Tiber laftiisa. Dambiishii waxay ku dul dhacday meel aad ugu dhow badda, oo u dhow toddobada buurood, halkaas oo lagu arkay a yeey. Way badbaadisay oo nuujisay carruurta ku jirta godkeeda Palatine Hill ilaa ay wadaad ka heleen, oo geeyey gurigiisa, halkaasoo ay ku soo korisay xaaskiisa.
Markii ay qaangaarteen, labada nin ee dhalinyarada ah ayaa markoodii dambe laga xayuubiyey Amulio oo lagu beddelay Numitor. Laakiin waxa noogu muhiimsan taariikhda ayaa ah in Romulus iyo Remus ay sidoo kale aasaaseen gumeysi Alba Longa oo ku yaal wabiga qarkiisa laftiisa, si hufan meeshuu yeey ka nuugay, madaxdoodiina waa la naadiyey.
Si kastaba ha noqotee, dooda ku saabsan meesha saxda ah ee laga sameynayo magaalada cusub ayaa keentay khilaaf naxdin leh oo u dhexeeya labadooda oo ku dhammaan doona Geerida Remo gacanta walaalkiis. Sida laga soo xigtay halyeeyga, Romulus sidaas ayuu noqday boqorkii ugu horreeyay ee Rooma. Haddii aan fiiro gaar ah u yeelanno taariikhyahannadii hore, waxay ahayd sanadkii 754 dhalashadii Ciise ka hor.
Kufsiga Haweenka Sabine, Halyeey kale oo Roman caan ah
Kufsiga Haweenka Sabine
Sidoo kale waqtiga Romulus waxaa iska leh sheekada afduubka haweenka Sabine, oo ah mid kale oo ka mid ah halyeeyada Roman-ka ugu caansan. Waxaa la sheegay in aasaasihii magaaladu uu aqbalay qofkasta oo ka socda Lazio inuu yahay muwaadin cusub si uu u buuxiyo.
Si kastaba ha noqotee, waxay ahaayeen ficil ahaan dhammaantood rag, taas oo ka dhigtay koritaanka Rome mid aan macquul ahayn. Romulus ayaa markaa ogaaday gabdhihii sabiyada, oo degganaa buurta dhow ee Quirinal wuuna u dhaqaaqay inuu qafaasho.
Si tan loo sameeyo, wuxuu tuuray xaflad weyn wuxuuna casuumay deriskiisa. Markii Sabineyaashu ay si ku filan ula yaabeen khamriga, wuxuu afduubay gabdhahoodii oo wuxuu geeyay Rome. Laakiin sheekadu intaas kuma eka.
Intaa iyada ah, wuxuu ka tegey amarka magaalada Tarpeia, oo jacayl u qabay Boqorka Latinos. Maaddaama ay ku dhawaaqeen dagaal ka dhan ah Rome ka dib afduubkii gabdhahooda, gabadhu waxay heshiis la gashay boqorka oo uu ku tusayo irid qarsoodi ah oo laga soo galo magaalada haddii uu siiyo waxa uu gacanta bidix ku haysto oo ay ku beddelato. Wuxuu ula jeeday jijimad dahab ah, laakiin, markii Sabineyadu ogaadeen marinka qarsoon ee Rome, boqorka wuxuu amar ku siiyay askartooda inay ku dumiyaan Tarpeii gaashaammadooda, oo si sax ah loogu soo raray gacmihiisa bidix.
Si kastaba ha noqotee, dhamaadka sheekadan waxay leedahay nooc kale. Waxay sheegaysaa in Roomaaniyiintu, markay ka warqabeen khiyaanada gabadha yar, ay ka tuureen buur la yiraahdo, tan iyo wixii markaa ka dambeeyay, loogu yeero Dhagaxa Tarpeya.
Ugu dambeyntii, waxaa jiray isku dhac u dhexeeya Sabines iyo Rome. Ama halkii, ma aysan dhicin maxaa yeelay gabdhihii la afduubay ayaa istaagay labada ciidan si loo joojiyo dagaalka. Haddii Roomaanku guuleysto, waxay waayi doonaan waalidkood iyo walaalahood, halka haddii Sabine ay guuleystaan, waxay noqon doonaan kuwa aan lahayn niman. Sidaas ayaa nabad lagu kala saxeexday labada magaalo.
Wadada Mazzamurelli, waa goob ka mid ah halyeeyadii Rome
Hadaad booqato Jilicsan Roman, waxaad ka heli doontaa wado yar oo, ka bilaabaneysa kaniisadda St. Chrysogonus, kor u kacayaa tii San Gallicano. Luuqani waa tan the Mazamurelli. Laakiin waa kuwee xayawaanadan xitaa leh waddo ku taal Rome oo loogu magac daray iyaga?
Waxaan ku aqoonsan karnay kuwa yaryar caqliga xun taasi waa qeyb ka mid ah dhammaan quraafaadka adduunka. Waxay noqon lahaayeen nooc ka mid ah elves oo ku raaxeysta sameynta tabaha yar yar ee dadka maraya iyo dabcan, kuwa ku nool wadadaas.
Xaqiiqdii, mid ka mid ah sheekooyinka ay ka kooban tahay halyeeygan ayaa sheegaya in uu jiray nin sumcad ku lahaa saaxirnimo si uu u arko xayawaan ka sarraysa. Guriga qofkan ayaa wali lagu hayaa wadada waxaana la sheegay inuu yahay ugaarsaday.
Si kastaba ha noqotee, wax walbaa kuma xuma agagaarka mazzamurelli. Kuwa kale ee ka sheekeeya halyeeygan Rome, iyagu waa makhluuqaad faa'iido leh oo heegan u ah inay deriska ka ilaaliyaan dariiqa magacooda wata.
Castel Sant'Angelo, oo ah goob halyeeyo badan oo Rome ah
Marka lagu daro mid ka mid ah astaamaha ugu muhiimsan ee Magaalada Aakhiro, Castel Sant'Angelo wuxuu leeyahay halyeeyo badan. Loo dhisay ahaansho Mausoleum ee Emperor Hadrian, wuxuu leeyahay ku dhowaad laba kun oo sano oo taariikh ah. Markaa layaab kuguma noqon doontid, in ay ahayd goob ay sheekooyin halyeeyo badani ka jireen.
Kuwa ugu caansan iyaga ayaa sabab u ah magaceeda. Waxaan ku jirnaa sanadkii 590 ee xilligeenna. Aafo ba'an oo ba'an ayaa ku dhacday Rome iyo baadariga Gregory kii weynaa abaabulay socod. Markay ku dhowaatay qalcaddii, ayay ka muuqatay dusheeda malaa'igta sare inuu gacanta ku haysto seef inuu ku dhawaaqo dhamaadka cudurka.
Sidaa darteed, qasriga oo keliya lama yiraahdo de Sant'Angelo, laakiin sidoo kale, jaantuska malaa'igta ayaa lagu dhisay dusheeda in, ka dib markii uu soo maray dhowr dib u soo celin, aad weli arki karto maanta.
Passetto di Borgo, oo ah muuqaal kale oo ka mid ah halyeeyo badan oo Rome ah
Kama fogaaneyno dhismihii hore si aan u ogaanno mid kale oo ka mid ah qodobbada Roomaanka oo ay ka buuxaan halyeeyo iyo sheekooyin quraafaad ah. Bari passetto ama dariiqa dariiqa ku biiro, si hufan, qalcaddii Sant'Angelo oo leh Vatican.
Waa qiyaastii nus mayl, laakiin waxay ahayd goobta noocyada kala duwan baradhada daadatay iyo wadaaddo kale kuwaasoo doonayey inay ku dhuuntaan xilliyada dagaalka iyo dhaca. Si kastaba ha noqotee, halyeeygu wuxuu leeyahay qof kasta oo ka gudba toddobaatan jeer wuxuu arki doonaa sida dhibaatooyinka oo dhami u dhammaadaan.
Marka halyeeygu waa sheekada loo yaqaan 'passetto di Borgo' oo ay ka soo muuqatay filimaan fara badan, taxane telefishanno ah iyo xitaa ciyaaro fiidiyoow ah.
Waxaan dhammeyneynaa booqashadeennii halyeeyada Rome ee jasiiraddan, oo aad weli ku arki karto maanta bartamaha Tiber. Waxay u egtahay doon oo dhererkeedu waa 270 mitir, ballaciisuna waa 70. Si kastaba ha noqotee, waxay ahayd mawduucyo sheekooyin mala awaal ah tan iyo weligood.
Xaqiiqdii, waxay saameynayaan muuqaalkooda. Waxaa la sheegay in boqorkii ugu dambeeyay ee Rome, Tarquinio oo ah Superb, ayaa waxaa ku tuuray wabiga dad ay isku reer yihiin. Wuxuu ahaa nin musuqmaasuq ah oo xataa sarreenkooda xaday. Wax yar ka dib dhacdadan, jasiiraddu waxay bilowday inay soo muuqato waxayna Roomaaniyiintu u maleeyeen inay asal ahaan ka soo jeedaan mahadsanid qashin urursan oo ku wareegsan jirka boqortooyada, qayb wanaagsan oo ka mid ahna ay ahayd, si hufan, sarreenkii uu xaday.
Waxaas oo dhan, Tiberina had iyo jeer waa la beeray cabsi ka mid ah muwaadiniinta Rome. Tani waxay socotay dhowr qarniyo ilaa, inta lagu gudajiray cudurka faafa, a abeeso (astaanta daawada) ee soo afjartay cudurka. Mahadsanid, Roomaanku wuu dhisay macbud lagu sharfo Aesculapius jasiiradda oo ay joojisay inay ka baqdo inay booqato. Waxaan ku xusuusineynaa in jaantuskani uu ahaa ilaaha Romanka dawada.
Gabagabadii, waxaan kuu sheegnay kuwa ugu caansan halyeeyada Rome. Si kastaba ha noqotee, magaalo tan jir tan waa inay lahaataa kuwo kale oo badan. Kuwa ku hadhay dhuumaha laga yaabo inaynu ku sheegno maqaal kale ayaa ah midka tilmaamaya Emperor Nero iyo Basilica-ka Santa Maria del Pueblo, Mid ka mid ah Castor Dioscuri iyo Pollux, ee ah Afka Runta ama kuwa badan oo u leh gabay Hercules.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Magaalooyinka » Roma » Halyeeyadii Rome
Dharka caadiga ah ee Jalisco
Ciyaaraha caadiga ah ee gobolka Kariibiyaanka